कांग्रेसी डाक्टरले शुक्रबार अस्पताल बन्द गर्ने, नेकपा डाक्टरले प्रतिरोध ! | NepalDut
कांग्रेसी डाक्टरले शुक्रबार अस्पताल बन्द गर्ने, नेकपा डाक्टरले प्रतिरोध !
नेपाल चिकित्सक संघले शुक्रबार (भोलि) १ दिनका लागि देशभर आकस्मिकबाहेकका अन्य सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा पूर्णरूपमा बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ।
तर, नेपाल चिकित्सक संघमा रहेका नेकपा निकट चिकित्सकहरुले भने त्यसको बिरोध गरेको छ । महाराजगञ्ज चिकित्सा क्याम्पसका पूर्व क्पाम्पस प्रमुख समेत रहेका त्रिवि शिक्षण अस्पतालका एक जना चिकित्सक रामप्रसाद उप्रेतीले भने, ‘यो नेपाल चिकित्सक संघको होइन कांग्रेस निकट चिकित्सकहरुको आह्रवान हो । हामी मान्दैनौं ।’
बिहिबार संघले विज्ञप्तिमार्फत् सांकेतिक आन्दोलन स्वरूप देशभरका सरकारी, गैरसरकारी, निजी, मेडिकल कलेज लगायतका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आकस्मिक बाहेकका अन्य सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा बन्दका लागि आह्रवान गरेका हो । नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेसका नेता हुन् ।
पूर्णरुपमा राजनीतिमा लाग्ने भन्दै ३३ वर्ष स्वास्थ्य सेवामा काम गरेका डा.श्रेष्ठले राजीनामा दिइसकेका छन् । उनले दिएको राजीनामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वीकृत गरीसकेको छ ।
नेकपा निकट चिकित्सहरुले भने बन्द, हड्ताल गरे प्रतिरोध गर्ने बताइसकेको छ । विहिबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालको परिसरमा भएको कार्यक्रममा प्रा.डा. प्रदीप ज्ञवालीले कुनै पनि बहनामा बिरामीहरुको उपचारमा अबरोध भए आफूले प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिए । चिकित्सकहरुको काम उपचार भएको भन्दै अस्पलतालमा राजनीति नगर्न चेतावनी दिए ।
डा.ज्ञवालीले डा.केसीलाई मोहोरा बनाएर राजनीतिक दल र स्वार्थ समुहहरुले शिक्षण अस्पताललाई राजनीतिको थलो बनाएको बताए । डा.केसीले सुरुमा अनशन गर्दा आफू नै सहयोगी र अभियान्ता भएर हिडेको संस्मरण गर्दै उनले तर डा.केसीको अनशन राजनीतितिर मोडिएपछि आफू अलग भएको बताए ।
डा.ज्ञवालीले नेपाल चिकित्सक संघ भित्र अनियमितता र भ्रष्टचार रहेको बताउँदै यो संघ केवल एउटा पार्टीको गोटी भएको बताए । संघका अध्यक्ष मुत्ती श्रेष्ठ कांग्रेसका नेता हुन् । संघ साझा बन्न नसकेको उनको भनाई छ ।
कार्यक्रममा प्रा.डा रामप्रसाद उप्रेतीले अस्पतालमा बन्द हड्ताल गरे प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिए । उनले अस्पताल शान्ति क्षेत्र भएको भन्दै अनशन, बन्द र हड्ताल बिरुद्ध आफूहरु उभिने बताए । बिरोधसभामा त्रिवि शिक्षण अस्पतालका, चिकित्सक, नर्श र स्वास्थ्यकर्मीहरुको उल्लेख्य उपस्थीति रहेको थियो ।